पीएसएलः पहिलो ओभरमै सन्दीपले लिए विकेट ! - Everest Dainik - News from Nepal
पीएसएलः पहिलो ओभरमै सन्दीपले लिए विकेट !
काठमाडौं, फागुन २५ । पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) अन्तर्गत इश्लामाबाद युनाइटेड विरुद्धको खेलमा सन्दीप लामिछानेले पहिलो ओभरमा नै विकेट लिन सफल भएका छन् । उनले आफ्नो पहिलो ओभरको दोस्रो बलमा फिलीप साल्टकाे विकेट लिन सफल भए।
सन्दीप आवद्ध लाहोर कलन्दर्सले पहिलो ओभरको पहिलो बलमै विकेट लिन सफल भयाे । पहिलो विकेट शाहीन शाह अफ्रिदीले लिए । यद्यपि, इश्लामाबादका ब्याट्सम्यानले बिस्फोटक ब्याटिङ गरेका छन् । इश्लामाबादका क्यामरुन डेलपर्टले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म उनले २१ बलमा ४७ रन प्रहार गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस आज पनि चम्किए सन्दीप, लिए चार खेलमा ४ कप्तानको विकेट !
याे पनि पढ्नुस नेपाली बलरसामु यूएई निरिह, नवौं विकेट गुम्यो